iOS 11 inokutendera kuti utore QR kodhi uchishandisa iyo iPhone kamera | IPhone nhau
Iwo matsva ari muIOS 11 ari kuoneka zvishoma nezvishoma apo ivo vanogadzira vanofungidzira neiyo nyowani beta uye kuverenga kweQR kodhi zvakananga kubva ku iPhone ndeimwe yeanoshanda ayo asina kutaurwa muhurukuro uye inowoneka musystem nyowani yekushanda. . Iko Kamera yekushandisa ye iPhone yedu ikozvino yave kugona kuona aya macode kungoita ne vhura uye tarisa iyo sensor zvakananga kune iyo kodhi. Iri nderimwe remabasa mazhinji asina kuziviswa muzuro rakakosha uye yatiri kuona sekufamba kwemaawa.
Iyo iPhone uye mune ino kesi iyo Apple Chitoro ine runyorwa rwakanaka rwechitatu-bato kunyorera izvo zvinokwanisa kuita iyi mhando yekuverenga neQR kodhi, asi unayo natively pachigadzirwa chinotiponesa nzvimbo uye nguva, sezvo isu tichifanira kungovhura kamera uye kuongorora iyo kodhi. Kana kodhi yacho yangotariswa, chiziviso chinosvika pane iyo iPhone neruzivo irwo, ingave kero yewebhu, wekubata kana kunyange kiyi yewebsite yeWiFi. Isu tinosiya zvakati wandei zvakatorwa newaanoshanda naye Miguel, kuti tione ichi chinhu chiri kushanda pamwe nezviziviso zvinosvika kana uchishandisa kodhi kuverenga nekamera:
Nongedzera kuQR nekhamera, gamuchira iyo ziviso uye vhura kana tichida. Iyi ndiyo nzira yakapusa inogona kuwanikwa kwenguva yakareba pane zvishandiso zveIOS uye izvo vanogadzira vatotanga kushandisa. Saka iwe hauchade chero chekunze app kuti utarise QR kodhi, Unogona kuzviita zvakananga kubva kuIOS 11 Kamera application.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iOS » iOS 11 » iOS 11 inokutendera kuti utore QR kodhi uchishandisa iyo iPhone kamera